Warshada Qalabka Abuurka Shaybaadhka - Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Sheybaarka Shiinaha
Xawaaraha wareega: 2800r/daqiiqo
5XQS-L dhagax-dhige shaybaadh oo loogu talagalay iniinaha khudradda qamadiga sisinta
5XQS-L Destone waxaa inta badan loo isticmaalaa kala soocida iniinaha yaryar (iniinta khudradda, iniinaha calafka iyo iniinaha ubaxa) iyo dhagxaanta. Waa isticmaalka noocyada kala duwan ee cuf-jiidad gaar ah iyo xawaaraha hakinta ee badarka iyo dhagxaanta cuntada. Qaado habka dabaysha iyo dhaqdhaqaaqa farsamada, si aad meesha uga saarto ciidda iyo wasakh kale oo culus. Waxaa inta badan loo isticmaalaa dhammaan noocyada kala duwan ee abuur si looga saaro dhagaxyada iyo qaybaha ciidda, helitaanka iniinaha adag.
5XWY mashiinnada kala saarista hadhuudhka dhererka dhululubada jeexan dherer ahaan
Dhululubada shaybaadhka ee shaybaadhka ayaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro abuurka iyo alaabta kale farqiga dhererka.